Photo Editor for Android™ 5.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.0 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
Application မ်ား ဓာတ္ပံုဆိုင္ရာ Photo Editor for Android™
Photo Editor for Android™ ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အခမဲ့ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်အေးမြ filter များနှင့်သက်ရောက်မှုများအတွက်ပျော်စရာဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ app ကိုလိုအပ်ပါသလား? ကို Android ™များအတွက်အခမဲ့ဓာတ်ပုံ Editor ကိုသငျသညျ တစ်ခုက Android device ကိုအတူယူကြပြီးတစ်ဦးလိုလားသူကင်မရာနဲ့အတူခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ကဲ့သို့သူတို့ကိုငါကြည့်ရှုစေသင့်ဓါတ်ပုံများမြှင့်တင်ရန်နှင့်ထိန်းညှိဖို့ရှာတှေ့နိုငျ app ကိုတည်းဖြတ်ကိုအကောင်းဆုံးပုံတစ်ပုံပါ!
, ဒီအခမဲ့ရုပ်ပုံအယ်ဒီတာကိုသုံးပါတစ်ဖွဲ့လုံးအသစ်ကအဆင့်အထိဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ယူပြီးလိုလားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုဒါရိုက်တာဖြစ်လာ! , သင့်ခရီးသွားဓါတ်ပုံတွေကို Edit ရှုခင်းပုံရိပ်တွေကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ဤအခမဲ့ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ app ကိုနှင့်အတူသာမန်ဓာတ်ပုံကနေလိုလားသူအရည်အသွေးကိုအနုပညာဖန်တီး!
cool ဓာတ်ပုံကို effect နှင့် filter, ဓါတ်ပုံများဖြတ်တောက်ဆွဲ, ရေး, အရောင်နဲ့တောက်ပပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင့် selfie နှင့်နောက်ကင်မရာဓါတ်ပုံမှုန်ဝါး add ရန်သင့်အား enable ။ သည်ကိုသင်ယူမြင်ယောင်သင်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အန်းဒရွိုက်™ device ကိုအဘယ်သူမျှမကိစ္စကဒီအခမဲ့ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ app ကိုအတူ HD ကိုအရည်အသွေးကိုရပါလိမ့်မယ်။
, ဒီအခမဲ့ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ Download အပေါငျးတို့သအေးမြသောကင်မရာ effect နှင့် filter သုံးပါနှင့်! အရေးပါသောအခိုက်ဖမ်းဆီးဖို့
Android ™ feature အတွက် photo editor:
★ HD ကိုမှဓာတ်ပုံကိုပြောင်း
★သင်၏ဓါတ်ပုံများရန်မှုန်ဝါး, Vignette & နွေးထွေးမှု Add
★ Insert အေးမြနဲ့ရယ်စရာစတစ်ကာများ
★ pixel အနုပညာသို့ပုံရိပ်တွေပြောင်း
★ ALTER အရောင်နဲ့ပြတ်သား
★ပြောင်းလဲခြင်းတိမ်းညွတ် & သီးနှံဓာတ်ပုံများ
★စတာတွေက Facebook, Instagram ကို, ပေါ်ရှိသင့်အကြိုက်ဆုံးဓါတ်ပုံ Share
အန်းဒရွိုက်™များအတွက်အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံ Editor ကိုစာသားသင်၏ဓါတ်ပုံများတည်းဖြတ်ဖို့တစျထောငျနညျးလမျးမြားကမ်းလှမ်း!
ရုံသင်တို့သည်ဤပျော်စရာဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုသုံးပါလျှင်သင့်ရဲ့ selfie အပေါ်တစ်ဦးအသေးမစုံလင်မှုသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဓာတ်ပုံပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ပင်စိတ်ကူးကို Android ™အခမဲ့ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာများ၏မှော်အေးဓါတ်ပုံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်တော်မူ photo filters တည်ရှိသည်။ အယ်ဒီတာလိုလားသူ features တွေ။ သင်ဤအခမဲ့ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာလိုလားတဲ့ App ကို၎င်း၏အေးဓါတ်ပုံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အကောင်းဆုံး photo filters အတူသင်တို့သည်နောက်မှားယွင်းတဲ့လုပျနိုငျသောကွောငျ့, သင် Facebook သို့မဟုတ် Instagram ကိုအပေါ်ကိုကြည့်ဘယ်လောက်စိုးရိမ်ပူပန်ရန်ရှိသည်ဘယ်တော့မှမည်! အန်းဒရွိုက်™, အေးမြဓာတ်ပုံကို effect နှင့် filter တွေနဲ့အခမဲ့ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာလိုလားတဲ့ App ကိုများအတွက်ဓာတ်ပုံ Editor ကိုရယူပါ!
အန်းဒရွိုက်™များအတွက်ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာအားလုံး rights reserved, AppsForIG ၏မူပိုင်ဖြစ်ပါသည်။
အန်းဒရွိုက်™အဘို့ဤအခမဲ့ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ app ကိုဓာတ်ပုံ Editor ထဲမှာအိုင်ကွန်နှင့် screenshots အတှကျအသုံးပွုဓာတ်ပုံတွေ Creative Commons License အောက်တွင်ရှိပါသည်။
အန်းဒရွိုက်မှာ Android ™ app ကိုများအတွက် Google Inc ကိုဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာတစ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို Google Inc ကိုမှဆက်စပ်မဆိုလမ်းနှင့်အတူမဟုတ်သလိုအတွက်ဆက်နွယ်မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်
Photo Editor for Android™ အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Photo Editor for Android™ အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Photo Editor for Android™ အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Photo Editor for Android™ အား အခ်က္ျပပါ
superuser4k စတိုး 45.66k 26.11M
Photo Editor for Android™ ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Photo Editor for Android™ အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.0
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://photoappsblog.wordpress.com/privacy-policy/
လက်မှတ် SHA1: C0:37:23:9B:48:4F:15:5B:55:90:B1:A4:B6:24:8D:3A:F8:F9:D7:1B
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Frames Instagram
Photo Editor for Android™ APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ